ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ရေဘေးအတွက် ရန်ကုန်ရောက် ရခိုင်အသင်းအဖွဲ့စည်းများမှ ဆန်အိပ် ၆၀၀ လှူဒါန်း ~ Myaylatt Daily.
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ရေဘေးအတွက် ရန်ကုန်ရောက် ရခိုင်အသင်းအဖွဲ့စည်းများမှ ဆန်အိပ် ၆၀၀ လှူဒါန်း
1:00 PM သတင်း No comments
Saw Thar Mg added4new photos — with Anp Ann and 49 others. မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
ရခိုင်သဟာရအသင်းနှင့်ရခိုင်လူမူအဖွဲ့အစည်းများ စုပေါင်းကော်မတီ(ရန်ကုန်)မှ မင်းပြားမြို့နယ်ရေဘေးဒုက္ခသည်များအတွက် ဆန်အိပ် ၂၀၀ မြောက်ဦးမြို့နယ်ရေဘေးဒုက္ခသည်များအတွက် ဆန်အိပ် ၂၀၀ ကျောက်တော်မြို့နယ်ရေဘေးဒုက္ခသည်များအတွက် ဆန်အိပ် ၂၀၀ စုစုပေါင်း ဆန်အိပ် ၆၀၀ ကို ၃၁-၇-၂၀၁၅-(သောကြာနေ့)လှူဒါန်းလိုက်ပါသည် ဆက်လက်လှူဒါန်းနိုင်ရန် ရခိုင်သဟာရရုံးတွင်ကယ်ဆယ်ရေးအလှူလက်ခံဌာနကိုဖွင့်လှစ်ထားပါသည်
နောက်ဆုံးသတင်းအရ မြောက်ဦးမြို့နယ်ရှိဒေသခံများအဆိုးဆုံးခံနေရပါသည် မြောက်ဦးမြို့ထဲလမ္မပေါ်မှာရေအမြင် ၇ ပေထိရှိနေပြီ လူနေအိမ်ခေါ်မိုးပေါ်တွင် ကလေးသူငယ် သက်ကြီးရွယ်အိုများရှိနေသော်လည်း ကယ်မယ့်သူမရှိဘူးလို့ကြားသိနေရပါသည် စက်လှေမျာ လှည်များမရှိသဖြင့် အသက်ရူံးဆုံးမူများရှိနေကြောင်းနဲ့ မြောက်ဦးမြို့သူများအားလုံးသည် နန်းရာကုန်းပေါ်ရောက်ရှိနေကြောင်းကိုဒေသခံပြည်သူတစ်ဦးမှ သတင်းပေးပို့ချက်အရသိရှိရပါသည်
ဦးလှမောင်သိန်း (သဟာရအသင်း) 095139790
ဦးကျော်ဇောလှ (ကျောက်တော်မြို့နယ်အသင်း) 0973257628
ဦးမြင့်ကျော် (မြောက်ဦးမြို့နယ်အသင်း ) 095064653